हरेक नेपालीले अनिवार्य पढ्नै पर्नेः म कट्टु किन्छु त्यसमा पनि कर तिर्छु, तर यो कर बाट के किन्छ सरकार? « Mom Nepal
हरेक नेपालीले अनिवार्य पढ्नै पर्नेः म कट्टु किन्छु त्यसमा पनि कर तिर्छु, तर यो कर बाट के किन्छ सरकार?
म बिहान ७ः३० मा कलेज पुग्छु। म घरमा सुत्छु।।यो मेरो श्रमले बनाएको घर हो। मेरो पैसाले किनेको जमिन हो। म यसको कर तिर्छु। मेरो छिमेकीले कोठा भाडामा लगाएका छ्न। उनी तेसको पनि कर तिर्छन। मैले बिहान खाएको पाउरोटीको पनि म कर तिर्छु। मैले बांच्न पनि कर तिर्नु पर्छ। म ६ घन्टा पढाउछु। मेरो दिमाग र श्रम बापत म तलब पाउंछु। तर त्यसमा पनि कर लाग्छ। म गाडी किन्छु।।तेस्मा कर तिर्छु। प्रतेक बर्ष कर तिर्छु। मे पेट्रोल किन्छु त्यसमा पनि कर तिर्छु। म सडकमा गाडी कुदाउंछु, त्यसकाे पनि कर तिर्छु। म सन्तानलाई पढाएबापत कर तिर्छु। म बिरामी हुन्छु, डाक्टरलाई जचाउदा पनि कर तिर्छु। म औसधि किन्छु त्यसमा पनि कर तिर्छु। म अँखाका लागि चस्मा किन्छु, त्यसमा पनि कर तिर्छु।
म जुत्ता किन्छु, त्यसमा पनि कर तिर्छु।म सर्ट किन्छु, त्यसमा पनि कर तिर्छु।म कट्टु किन्छु त्यसमा पनि कर तिर्छु।म बिजुलीको सुल्क तिर्छु, त्यसमा पनि कर तिर्छु।म पानी पिउछु, त्यसमा पनि कर तिर्छु।म जिवनका प्रतेक पाइलामा कर तिर्छु। मलाइ हर्ट एट्याक हुन्छु, औसधि गर्छु। मृत्युबाट फर्किदा पनि कर तिर्छु। दुर्घटना हुन्छ। मेरो खुट्टा काटिन्छ, तर म सङ्ग कर पनि लिइन्छ। बम पड्किन्छ, म बल्ल बल्ल बांच्छु, म सङ्ग कर उठाइन्छ।
तर यो कर बाट के किन्छ सरकार? – १. मन्त्री र हाकिमलाइ महङ्गो गाडी किन्छ। २. मन्त्री र हाकिमले चड्ने गाडीमा हाल्न तेल किन्छ। ३. मन्त्री र हाकिम बिदेश यात्रा गर्न भत्ता दिन्छ सरकार। गत साल १४०० हाकिम र मन्त्रीले बिदेश डुले मैले अस्पतालमा उपचार गर्दा तिरेको करले। ४. दलका कार्यकर्तालाई खर्छ बांड्छ। ५. बाटोमा एक इन्चको पिच गरेर ठेकेदारलाई पैसा दिन्छ। हाकिम र मन्त्रीले ३५५ प्रतिशत घुस खान्छ्न। ६. देशको ब्यापार घाटा सात गुना बढी भएको छ। टोल टोलका फलफुल दुकानमा अस्ट्रेलियाबाट ल्याएका स्याउ छ्न। तर जुम्लाका स्याउ भैसीले खादैंछ्न। ७. गरिब ले सिटामल पांउदैन। सुकुम्बासीको घर छैन। थुप्रै महिला शरीर बेच्न बाध्य छ्न। ८. किन?
म यो देशको सन्तान हुं। मेरो जिम्मेवारी छ यो देश जोगाउने। म नागरीक हुं यो देशको, मेरो जवाफदेहिता छ देशको संरक्षण गर्ने। तर मलाई सासन गर्छ्न मेरा देशका नेता। मलाइ सोषण गर्छ्न मेरा नेता। मैले भर्खर एउटा सन्तान जन्माएं। उस्ले यो देशलाइ जोगाउन ज्यान पनि दिन्छ भविश्यमा। तर, उस्लाइ लिएर घर फर्किदा मैले उस्लाई जन्माए बापत कर तिंरे। अब उस्को नाम दर्ता गर्दा कर तिर्नु पर्छ। उसलाई स्कुल भर्ना गर्दा कर तिर्नु पर्छ। उस्को बिबाह दर्ता गर्दा कर तिर्नु पर्छ। उसको नागरिकता लिदां कर तिर्नु पर्छ।
कहिले सम्म म कर तिरिरहने अनि मन्त्री र हाकिम मेरो करबाट मस्ति गरि रहने? म तपाइँलाई भोट हाल्न चाहन्छु, के मेरा यी प्रस्नको जवाफ तपाइँ सङ्ग छ? के चुनाब मेरो श्रममा लगाएको करबाट बाजि खेल्न खेलमात्र होरु हरेक नागरिक सचेत हुन अवास्यक छ। सोध्नुहोस प्रस्न। लोकतन्त्रलाई आफ्नो हातमा लिने प्रयास गर्नुहोस। निरासा होइन चेतनाको खेती गरौं। याे चेतनामुलक सन्देश हामीले सामाजिक सञ्जालबाट लिएका हाैं । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल याे चेतनामुलक सन्देश तपार्इहरू पनि शेयर गरेर सबै नेपाली माझ पुर्याउन सहयाेग गर्नुहाेस्।